Glass entona, Multi-zehiny entona, entona Smart - Hanyang
Qingzhou Hanyang entona Project Co., Ltd miforona avy Qingzhou Xianke Mechanical Device Co., Ltd mba hihaona amin'ny ilain'ny ny fampandrosoana ny vokatra. Qingzhou Xianke Mechanical Device Co., Ltd dia naorina tamin'ny 2010, ka izany dia efa natokana ho an'ny famolavolana, ny fikarohana sy ny orinasa mpamokatra entana, ny entona injeniera sy ny fitrandrahana fasika machinery.After taona maro ny fampandrosoana, matihanina famokarana sy ny fanorenana, tamin'ny 2016 no nanorina ny orinasa fanampiny orinasa Qingzhou Hanyang entona Project Co., Ltd, Hanyang fambolena specializes amin'ny entona famolavolana, famokarana, fanorenana, fambolena sy Ankehitriny-fivarotana fanompoana.
Ny orinasa manarona faritra iray mihoatra ny 15000 metatra tora-droa, ary ny fanamboarana ny tantara atrikasa roa ampahatelon'ny ao amin'ny faritra iray manontolo. Ny atrikasa dia fitaovana fanamboarana tanteraka foto-drafitrasa sy ny anjara fanompoana trano madio sy milamina. Ary ny orinasa famokarana dia nanangana sampan-draharahan'ny, mpiasa sampan-draharaha, ny varotra sampan-draharaha, R & D departemanta, famolavolana sampan-draharaha, sampan-draharaha sy ny fividianana sampan-draharaha hafa. Office manokana maharitra miovaova amin'ny manodidina ny 20 ny olona, ​​15 ara-teknika ny injeniera, ny orinasa mpiasa no miovaova nandritra ny fotoana ela be noho 50 ny olona, ​​fanorenana mpiasa 108 olona, ​​ny ankamaroan'ny dia mahay ara-teknika mpiasa izay mandray anjara amin'ny ity orinasa nandritra ny taona maro .
Taorian'ny taona maro ny asa sy ny fikarohana, dia mampiasa vokatra tsara kalitao sy Ankehitriny-varotra fanompoana mba handresy mpanjifa sy hanorina mafy orina an-toerana sy avy any ivelany ny tsena. Hatreto, ny vokatra no mpivaro-bary tamin'ny 30 mahery faritany, kaominina, ary mahaleotena faritra, ary naondrana soa aman-tsara ho any Rosia, India, Afrika Atsimo, Vietnam, Bangladesh, Singapore, Nigeria, Kenya, Togo, Congo sy ny hafa firenena sy ny faritra. Isika nahazo laza lehibe ary nanorina fiaraha-miasa maharitra amin'ny fifandraisana ao an-toerana sy any ampitan-dranomasina mpanjifa.
Ny vokatra tsara indrindra, ny tsara indrindra fanompoana tsara, ny lowset vidin'ny, Hanyang hitondra bebe kokoa toerana manodidina ny tokotany, dia faly ny asa fanompoana izay, dia tonga soa ianao mba hanontany.